बाम एकताबाट प्रजातन्त्र माथि खतरा छ: महामन्त्री थापा
सिंहलिला समाचार, असोज ५, पाँचथर
राप्रपा प्रजातान्त्रिकका महा मन्त्री सुनिल बहादुर थापाले बाम एकता भए पछि प्रजातन्त्रबादी शक्तीहरुले प्रजातन्त्र माथि खतरा भएको महसुस गरेको बताउनु भएको छ ।
संगठन बिस्तारको क्रममा पाँचथर आइ पुगेका थापाले सिंहलिला एफ.एम. को सिंहलिला बिशेषमा कुरा गर्दै सो कुरा बतानु भएको हो । थापाले जनताले जुन उत्साहका साथ नेकपालाई मतदान गरेका थिए त्यो अनुरुपको व्यहार नपाएको गुनासो गर्नु भएको छ । बैदेशीक हस्तक्षेप, राज्य संचालन गर्ने सरकारका जिम्मेवार मन्त्रीहरुको गैर जिम्मेवारीले पनि जनतामा निरासा पलाउन थालेको छ ।
जनतालाई अरिङ्गाल लगाउने जस्ता गैर जिम्मेवार उल्का कुरा गरेर देशका प्रधानमन्त्रीले दिन बिताउनु नहुने तर्क राख्नु भएको छ । फरक प्रसंगमा महामन्त्री थापाले जनताले बैकल्पीक शक्तीको आवश्यकता महसुस गरेका छन् त्यो शक्ती आफ्नो पार्टी भएको दावी गर्नु भएको छ । पूर्व मन्त्री समेत रहेका थापाले आफ्नो कार्यकालमा नेपाललाई पेट्रोलियम पदार्थमा रहेका ब्यापार घाटा न्युन गर्न सकेको बताउनु भयो । इच्छा शक्ति भए देशलाई समृद्ध बनाउन सकिने धारणा राख्नु भएको छ । देशमा भएको दक्ष जनशक्तिलाई काम दिन सके देशले उन्नती गर्ने बताउनु भएको छ ।
महामन्त्री थापाले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी प्रजातान्त्रिक र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी बिच एकता प्रकृया पनि चलिहरेको आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिनु भएको छ । उहाँले हिजो जस्तो अपरिपक्क एकता अब नहुने समेत दावी गर्नु भएको थियो । प्रदेश नं. १ को पार्टी प्रमुख समेत रहेका थापाले आफु जिल्ला दौडाहमा पाँचथरमा पार्टी संगठन काममा आएको बताउनु भएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा राप्रपा प्रजातान्त्रिकका सह महामन्त्री बाबुराम बस्नेत, सचिवालय सचिव मोहन दाहाल, केन्द्रीय सदस्य चर्तुमान बिश्वकर्मा, मानदेव केरुङ लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।